ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ January 31, 2010 at 12:39 AM
တိမ်တွေ ရှုခင်းတွေ ရိုက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရလာမှာပါလေ.
လှလိုက်တာ။ ပြက္ခဒိန် ထုပ်လို့ရတယ်၊
လင်းဒီပ January 31, 2010 at 12:48 AM
ငါးပုံမြောက် အဝါရောင်တစ်ပွင့်ပန်းက အလှဆုံးလို့ ခံစားမိပါတယ်..။
khet myint myint January 31, 2010 at 1:05 AM
အရောင်တွေ စိုချက် တောက်ချက် ဗျာ..
ဒါနဲ့ ပေါ့ထရိတ်ပုံရိုက်နည်းတွေ လေ့လာပါဦးနော်
အလကား အခမဲ့ မော်လဒယ်လ် လုပ်ပေးချင်ရို့ပါ
မီယာ January 31, 2010 at 3:24 AM
အမ သက်ဝေ ဓါတ်ပုံလေးတွေ လိုချင်လိုက်တာ... လောလောဆယ် ဆိုဒ်ဘားမှာ ပန်းပုံတွေ တင်ထားတာလေ... ဒုတိယပုံက အရမ်း အရမ်းလှတယ် အမရေ... ပန်းရိုးမ ပြက္ခဒိန် ကိုလည်း သတိရတယ်
ရွှန်းမီ January 31, 2010 at 4:21 AM
မသက်ဝေ.. ပြက္ခဒိန်ထုတ်ပါ =)
Hmoo January 31, 2010 at 7:58 AM
I prefer 2nd to all.
Thx4supporting2every body ,who face the storm alone..
Appreciate sweet :)
T T Sweet January 31, 2010 at 8:13 AM
ဟွန့် ... ဒီနှစ်ကျပ်ခွဲတန်ကြီးနော် ... ဟိုချိန် ဒီချိန်နဲ့ ...
ခုလဲ များတို့ကို ...
(ပန်းကလေးများကိုယ်စား လာပြောပေးပါသည် ... :>)
Moe Cho Thinn January 31, 2010 at 9:40 AM
ချိုသင်းလဲ ဒုတိယပုံကို အကြိုက်ဆုံး။
Hmoo January 31, 2010 at 10:14 AM
U need2feel & love flower 2....
Flower is representative of love & peace :)
sonata-cantata January 31, 2010 at 10:18 AM
၅) တင့်တင့်တို့ အရွယ်
ချစ်ကြည်အေး January 31, 2010 at 10:20 AM
အလှကိုယ်စီ လို့ ပေးချင်တယ်....အကုန်လှလို့.....အဲဒီလိုပဲ လူတဦးချင်း တယောက်ချင်းဆီမှာ တခုကောင်း ဒါမှမဟုတ် ဒီထက် ပိုတဲ့ အရည်အသွေးလေးတွေ ကိုယ်စီရှိနေကြတာလေ....၊ ပန်းကလေးတပွင့် ချင်းစီဟာ လူတဦးချင်းစီကို ကိုယ်စားပြုနေသလို ခံစားလိုက်ရတယ်....:)
ကလူသစ် January 31, 2010 at 11:40 AM
အုန်းသီးရရင် ပထမဆုံးရိုက်ကြတာ ပန်းပုံထင်ပါ့
Kay January 31, 2010 at 12:06 PM
အင်း..ဒီ က စပြီးေ၇ှ့ကို တော့.. လက်စွမ်းပြပုံတွေ ကြည့်ရတော့မယ်ပေါ့..
ပန်းခရမ်းပြာ January 31, 2010 at 2:02 PM
မောင်မိုး January 31, 2010 at 5:14 PM
ဟ...တကယ့်ဆရာကြီးပါပဲ ။ ရိုက်ချက်တွေက လန်ထွက်နေတာပဲ။ အားကျတယ်ဗျာ။
pandora January 31, 2010 at 8:40 PM
လင်းဒီပ နဲ့ တူတယ်။
အကြိုက်ဆုံးက ၅ ပုံမြောက် အ၀ါရောင်။ ဂန္ဓမာ ထင်တယ်။
သက်ဝေ January 31, 2010 at 9:57 PM
ရွာသားလေး... ကျေးဇူးတင်တယ်နော်... အနီးကပ်အရိုက်ခံချင်ရင် ခုထဲက ကြိုတင် စာရင်းပေးနိုင်ပါပြီ...း))
အမည်မဖေါ်လိုသူ စာဖတ်သူ နဲ့ ညီမ ရွှမ်းမီ... ပြက္ခဒိန်ထုတ်ဖို့အားပေးတာ ကျေးဇူး...
အကြိုက်ချင်းတူနေတဲ့ လင်းဒီပ နဲ့ ပန်ပန်... အဲဒါ ဒေစီပန်းလေ... လှတယ်.. ကိုယ်လဲ အဲဒီပုံကို ကြိုက်တယ်...
ခမမ... လာခဲ့ အရိုက်ခံချင်တယ်ဆို သေချာပေါက် ရိုက်ပေးမယ်...။
ဘာနဲ့ရိုက်ပေးရမလဲ... နှစ် တလက်မ လိုချင်လား နှစ် ပတ်လည် လိုချင်လား... :-P
မီယာ နဲ့ ချိုသင်း... ကြိုက်တဲ့ ပုံချင်းတူနေတယ်ပေါ့...။ လှတယ်လို့ ပြောကြလို့ ပျော်နေတယ်။ မီယာ ညီမ လိုချင်တဲ့ပုံ ယူသွားပါ...
Hmoo... Thanks. Sometimes people have to stand alone to prove that they can still stand... Be strong..!!!
ဒေါ်ဆွိ... တခါတလေတော့လဲ...း))
မွန်... ကိုယ်တိုင်က ရိုက်ချင်နေသူပါ... မော်ဒယ် အလိုရှိပါတယ်...း)
ပေါက်... တူတူပဲ.. အဲဒီလိုနေရာမျိုးတွေကို တခါလောက် အတူတူသွားပြီး ရိုက်ကြတာပေါ့...
သီတာ... နာမည်လေးတွေက ချစ်စရာ... စဉ်းစားပေးတာ ကျေးဇူးနော်။
ချစ်ကြည်... အတွေးတစနဲ့ တပွင့်ပန်းလေးတွေကို တမင် ရွေးရိုက်ခဲ့တာ.. သူငယ်ချင်းတွေးတာ ကိုယ်တွေးမိတဲ့ အတွေးနဲ့ ဆင်တယ်...း)
ကလူသစ်... နှစ်ကျပ်ခွဲဝယ်ပြီးပြီလို့ အခိုင်အမာ သတင်းရတယ်။ ကလူသစ်ရိုက်ထားတဲ့ ပန်းပုံတွေ ပြပါ... ဒါပဲ...
ကေ... လာမယ်.. လာမယ်... အပျင်းထူပြီး စာမရေးချင်ရင် ဓါတ်ပုံတွေ တင်ဖို့ ကြံစည်ထားပြီးသား...း))
မချို... ဝယ်လေ... တူတူရိုက်ကြမယ်... (မျောက်နဲ့ ဆည်းဆာ တော့ မရိုက်ဘူးနော်...)
မောင်မိုး... ပြောပုံကို ကြောက်လိုက်တာ... တကယ့် ဆရာကြီးတွေကြားရင် အော်ရယ်နေပါအုံးမယ်...။ တိုးတိုးဟ...
အားပေးသွားကြသူများနှင့် မှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။
ခွန်မြလှိုင် February 1, 2010 at 12:06 AM
ပထမ၊ ဒုတိယနဲ့ နောက်ဆုံးပုံကို ကြိုက်တယ် ကြားပုံတွေက အလင်းများ သလားလို့။ ကိုယ့်မျက်စိကပဲ အခြေအနေမကောင်းလို့ အရောင်တွေ ကြည့်ရတာ အလင်းစူးနေသလား မသိဘူး အမသက်ဝေရေ။ လိုအပ်ရင် မော်ဒယ်လ်တော့ ထိုင်ပေးချင်သား... ၀ါးဆစ်ပိတ်နဲ့ ရိုက်ခံရမှာတော့ ကြောက်ကြောက် :P
myo February 1, 2010 at 11:29 AM
အောက်ဆုံးပုံကတော့ စိမ်းစိုတောက်ပြောင်နေတဲ့ အရွက်ဖားဖားကြီးတွေကို ကြိုက်တာ..
Nge Naing February 1, 2010 at 2:41 PM
ပန်းတွေ သိပ်လှတာပဲ။ ကျွန်မလည်း ပန်းတွေကို သိပ်ပြီး စွဲစွဲလန်းလန်း မရှိခဲ့ပေမဲ့ အခု အသက်ကြီးလာလို့လားမသိဘူး ပန်းအလှတွေကို သဘောကျတတ်လာတယ်။
ရွှေပြည်သူ February 4, 2010 at 12:14 AM
အစ်မသက်ဝေရဲ့ တစ်ပွင့်ပန်းလှလှလေးတွေကို ငေးမောသွားပါတယ်း) ညီမလည်း ပန်းမပန်တတ်ပေမယ့် လှနေတာလေးတွေ မြင်ရရင် ပျော်မိပါတယ်...